Ụzọ anyị -APICMO cdmo Manufacturers
Ọdịiche dị iche iche na omenala, ọ nwere ike inyere ndị ọkà mmụta sayensị ọsọ ọsọ na-agba ọsọ usoro R & D na kemịkal na ọgwụ.
APICMO nyere nanị ndị ahịa ICH ọtụtụ ihe dị elu na ọnụ ala API. A na-enyocha ihe niile ngwaahịa APICMO na-emepụta nke China na-enyocha tupu e bubata ya iji chọpụta njirimara ngwaahịa. Ọrụ a na-eme ka ndị ahịa APICMO nweta ngwaahịa dị mma n'oge niile.
APICMO kwadoro ịsọpụrụ nkwanye ùgwù nke ụlọ ọrụ ọgwụ na-emepụta ọgwụ iji jide n'aka na ọrụ niile anyị na ngwaahịa anyị dị mma na gburugburu ebe obibi.
APICMO bụ ISO 9001: 2008 kwadoro ya na ọrụ azụmahịa ya niile na-akwado nlezianya na njikwa njikwa atumatu ụwa.
Nlekọta ihe omimi
Site na ụlọ ọrụ R & D nke zuru ezu na Shanghai, ụlọ ọrụ 5 na ụlọ akwụkwọ mahadum, ụlọ ọrụ 2 na Henan na Jiangsu, na netwọk ndị na-ebu ngwá ọrụ dị na China, APICMO isi ọrụ ọkachamara kpuchie mmepe na mmepụta nke heterocyclic ogige (dịka piperidines, piperazines, pyrrolidines ...), oghere spiro, acids boronic, benzenes, amino acids na peptides, oghere chiral, na-emechi ihe, nucleosides & nucleotides, APIs, wdg.